သင်တို့ ဘယ်လို အမျိုးအစားထဲ ပါသလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သင်တို့ ဘယ်လို အမျိုးအစားထဲ ပါသလဲ
သင်တို့ ဘယ်လို အမျိုးအစားထဲ ပါသလဲ
Posted by thihayarzar on Feb 6, 2013 in Creative Writing | 8 comments
ကျီးကန်းတွေဟာ သူတို့နဲ့ မျိုးနွယ်တူတဲ့ ကျီးကန်း တစ်ကောင်ကိုပဲ ဖြစ်စေ သုံးကောင်ကိုပဲဖြစ်စေ အုပ်စုလိုက်ကိုပဲ ဖြစ်စေ ဆော်လိုက်တာသို့မဟုတ် အနိုင်ကျင့်လိုက်ရင် သူတို့မျိုးနွယ်များဟာ ရှိသမျှ အင်အားနဲ့ ချီတက်ပီး သူတို့ မျိုးနွယ်ထဲက အကြောက်ဆုံး ကျီးကန်းတွေက ဘေးကနေ ရန်သူကို ၀ိုင်းပီး အာကြတယ် အာတယ်ဆိုတာ နှစ်လုံးဘက်ပြန်တာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် အော်တာကိုပြောတာ။ ဒုတိယတန်းစား ကြောက်တဲ့ကောင်တွေက အပေါ်ကနေ ချီးတွေ သေးတွေ ပါချပန်းချတယ်။ သတ္တိရှိတဲ့ ကျီးကန်းတွေကတော့ တစ်ဖက်က ရန်သူကို ခြေနဲ့ ကုတ်တယ် အတောင်နဲ့ ရိုက်တယ်။ အရမ်းသတ္တိကောင်းတဲ့ ကျီးကန်းတွေကကျတော့ ရန်သူကို နှုက်သီးနဲ့လည်းထုိးတယ် ခြေနဲ့လည်းကုက်တယ် တောင်ပံနဲ့လည်းရိုက်ကျတယ် သူ့တို့က သေလည်းသေနိုင်တယ် သေမှာလည်းမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ အဆင့်ထဲပါတယ်။ စော်ကားရင် အသက်ပါအသေခံမယ့် ကောင်တွေပေါ့။ သူတို့ ကျီးကန်းမျိုးနွယ်စုတွေဟာ အမျိုးကို ထိရင် ဆက်ဆက်ထိမခံသလို ကြောက်ပါတယ် ဆိုတဲ့ကောင်တောင် ဘေးကနေ အော်ပီး အားပေး ခြောက်လှန့်ပေးဖော်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာလည်း အမျိုးကို ထိရင် ဆက်ဆက်ထိမခံတက်တဲ့ သူတွေ ရှိကြပေမယ့် အသက်ပေးပီး သေမှာ မကြောက်တဲ့ သူတွေကတော့ မရှိသလောက်ရှားသေးတယ်။ အမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ငါတို့အမျိုးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုချည်းအော်နေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ကလည်း သူများမျိုးနွယ်ကို သွားပီး ရန်မစနဲ့ မကျူးကျော်နဲ့ နယ်မချဲ့နဲ့။ သူများကရန်စမယ် ကျူးကျော်မယ် နယ်ချဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျီးကန်းမျိုးနွယ်တွေလို တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ရန်သူကို တိုက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်။ အားလုံးက ဘေးကနေ အာနေမယ်ဆိုရင်လည်း မဖြစ်သေးဘူး။ ဟိုဘက်က ခြောက်လိုက်တာနဲ့ လန့်ပီး ပြေးကုန်ကြမှာ။ အမျုိး ဘာသာ သာသနာ့ အတွက် အသက်ပေးပီး တိုက်ခိုက်မယ့် သတ္တိရှိတဲ့ လူမျိုးတွေလည်း လိုအပ်နေတာ အမှန်ပဲ။ အသိညဏ်နည်းပါးတဲ့ တိရစ္ဆာန်ကျီးကန်းတွေတောင် သူတို့ မျိုးနွယ် သူတို့ အမျိုးတွေကိုထိရင် ၀ိုင်းဆော်ကြတယ်။
မိမိ နိုင်ငံ မိမိလူမျိုး မိမိဘာသာ ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် အားလုံးမှာ မျိုးချစ်စ်ိတ်ဓာက်ကလေးတွေ ရှင်သန်ထက်မြက်နေဖို့လိုတယ်။ ဒါမှ ကိုယ့်ခြံစည်းရိုးကလုံမှာ ခြံစည်းရိုးမလုံရင် ခွေးဝင်မယ် နွားဝင်မယ် သူခိုးဝင်မယ်။ ခွေးဝင်ပီး ချီးယိုမယ် နွားဝင်ပီး မြက်စားမယ် အပင်တွေရဲ့ အညွန့်အဖူးတွေ စားမယ်။ သူခိုးဆိုရင်လည်း ထမင်းချက်အိုးပါမကျန်အကုန် အခိုးခံရမယ်။ ခြံစည်းရိုးကို လုံအောင်ကာမယ် ကျော်ဝင်လာရင် သူဘက်က ဖောင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဆော်မယ်။ တစ်ယောက်ချင်းမနိုင်ရင် အုပ်စုလိုက်ဆော်မယ်။ အသက်ပါပေးရင်ပေးရပလေ့စေ အလကားပေးပီး အလကားကျွေးမယ့်အစား အလကားအသေခံမယ့်အစား သတ္တိလေးတော့ ပြပီး သေစမ်းချင်တယ်။ အားမတန်လို့ မာန်လျော့တာ အလကားလူတွေရဲ့အလုပ် အားမတန်ပေမယ့်မာန်တင်းပီး ပြန်ချတာမှ လူအလုပ် ငွေနောက်လိုက် ရာထူး စည်းစိမ် အပျော်အပါးဘက် မက်ပီးတော့ အကုန်ချကျွေးနေမယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကင်းဝင်သွားလိမ့်မယ် ကင်းဝင်သွားပီဆို မလွယ်တော့ဘူး။ အပေါ်ကစာက တရားနာရင်း သိလာတာ အောက်ကတော့ စိတ်ထဲကဟာတွေချရေးထားတာ။ ရွာဆူတယ်တော့မထင်ပါနဲ့။ ထန်းရည်ပေါ်ချိန်မို့လို့ပါ။ ဘယ်သူကိုမှ စော်ကားပီး ပြောတာ မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုက မျိုးချစ်စိတ်နည်းနေလို့ လောဘတွေကြီးနေကျလို့ နောင်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရယ် ထေရ၀ါဒဆိုတာရယ်ကို နောင်သားစဉ်မြေးဆက်တွေ တီတွက်ကျွက်ဆက်တွေကျရင် မမှီမှာစိုးလို့ မျုိးချစ်စိတ်နဲ့ပြောပြတာ။
ဒီပို့စ်လေး ကြိုက်တယ်ဗျာ ၊
အခုလိုမေးလာမှပဲ ကိုယ်က ဘယ်အတန်းအစားလည်းဆိုတာပြန်စဉ်းစားမိတယ် ၊
ဝိုင်းအာတဲ့ အကြောက်ဆုံးထဲမှာ မပါတာတော့ သေချာတယ် ၊
အနည်းဆုံး ခြေနဲ့ကုတ် အတောင်နဲ့ရိုက်တဲ့အထဲတော့ ပါစေရမယ်၊
ကောင်းလိုက်တဲ့ message ကို ကျီးကန်းရေ.. အဲ ယောင်လို့ .. သီဟရာဇာ ရေ..
ဒီကလည်း ကျီးမျိုးပါပဲဗျ .. ကျီးမျိုးမှ အာခေါင်ကရဲရဲ.. အတောင်က ကားကား.. အတက်က ချွန်ချွန်နဲ့..
ကိုယ်က တော့ စမကျူးဘူး.. ကျူးခဲ့တော့ ရှူးတိုက်ကာ ဆော်ပစ်လိုက်မယ်..
လာလေရော.. အ . .အ ..
ကိုလူကလေးကတော့ ဖြဲခြောက်တဲ့ အဆင့်မှာထင်တယ် ရန်သူကို ဘယ်နေရာကပဲ တိုက်တိုက်ပေါ့ အရေးကြီးတာ ငါတို့တွေကို စော်ကားတဲ့ကောင်တွေကို နိုင်ရင် ကျေနပ်တယ်။ ဟုတ်တယ်မို့လား။ စတာပါ။ ကိုမျိုးသန့်ကလည်း ငါတို့အမျိုးထိရင် စော်မယ်တဲ့ သူက တော့ နှုက်သီး မအားလို့ထင်တယ်။ ဘုရားတောင်မှ သူ့အမျိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ စစ်တပ်ကြီးကို သုံးကြိမ်တောင် သွားတားသေးတယ်။ သူ့အမျိုးတွေ ပျက်စီးမှာကို မလိုလားလို့ စောင့်ရှောက်တာ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမယ်။
ဖြဲခြောက်တာ ဟုတ်ပါဘူးဗျာ .. ရောလွန်းရင် ပေါလွန်းတယ် ထင်နေမှာ ဆိုးလို့ပါ..
ခေါင်း ငုံ့ ပေးတာ ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်လူ.. ခန္တီ ဆိုတဲ့ “မနိုင်၍ သည်းခံခြင်း” ကြောင့်သာ ..
ငုံ့ပေးထားတာကို လာမပုတ်နဲ့.. ဟင်း … ဟင်း.. မီးပွင့်သွားမယ် .. ဆရာ..
(တော်ပြီ.. ပြောရဲတော့ဝူး.. .. ဟူး.. ဟူး.. )
ဂေဇက်က ကိုဖိုးထောင် ပြောပြတဲ့
လူနဲ့တိရိ စ္ဆာန်သာမန်တူတယ်လို့ပြောလို့ရတာက စားမယ် အိပ်မယ် မေထုံမှီဝဲမယ်ပေါ့
ကျုပ်အနေနှင့်ကတော့ ယမကာလေးအစစ်ပါသပေါ့ ( mrgreen: )
( ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူလို့တော့ထင်ဒါဘဲ ဝုတ်ဝုတ် )
လူဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရရင် ရတဲ့ပွိုင့်နဲ့နေ့တွက်မကိုက်တော့ အကျဉ်ချုပ်ပြောရရင်
( အားလုံးသိကြပါတယ် ဂေဇက်မန်ဘာမှန်းသိအောင်ဝင်ဖေါတာ )
ခွေးတွေမှာ ဖေဖေမေမေကိုကိုမမဆိုတာကို အသက်ရွယ်တစ်ခုထိဘဲထားကြတယ်
အရွယ်ရောက်တာနဲ့ ဖေဖေလဲ ကိုယ့်လင်ဘဲ မေမေလဲ ကိုယ့်မယားဘဲ
( ခွေးတွေက အလိုမတူလို့ကတော့ မှားသောမှန်သော ဂရုကိုလုံးဝမစိုက်ဘူး
ကျန်တာကတော့ နောက်က ပညာစိဒေဖေါဖို့ချန်ထားလိုက်မယ်
Independence Day ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ တစ်ခြားဂြိုလ်က ဂြိုလ်သားတွေ လာပြီး နယ်ချဲ့လို့ ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေအားလုံး ပေါင်းတိုက်ကြရတာ။
ဒီ ၂၁ရာစုကုန် လို့ ၂၂ရာစုရောက်ရင် အဲဒီလို ဂြိုလ်သားတွေ ရောက်မလာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်လဲ နော။
ဒီတော့ ကမ္ဘာပေါ်က လူလူချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲလို့ မရဘဲ၊ သူ့လူမျိုး၊ ငါ့လူမျိုး ခွဲထားလို့ မရဘဲ ကမ္ဘာဟာ ရွာတစ်ရွာလို ဖြစ်နေသင့်ပါပြီလေ။
အာဖရိကန်မဟုတ်သူတွေရဲ့. ၁~၄% က..Neanderthals နဲ့လူ(Humans)တွေ အိပ်ယာထဲနောင်ဂျိန်ချရင်း ထွက်လာတဲ့ “ဟာ”တွေတဲ့..
လူသားစစ်စစ်နဲ့.. သွေး(ဒီအန်အေ)ရောနေသူတွေ.. ခွဲခြား.. ကွဲပြားပြီး.. သတ်ကြဟေ့..
ဒါမှ.. အာဏာရှင်တွေ Divide and rule နဲ့အုပ်ချုပ်ရလွယ်မှာ..
May 6, 2010 – About 1 percent to4percent of the DNA of non-Africans today comes from Neanderthals,ateam in Germany reported, though some …
Jul 4, 2012 – The United States today may be the most color-blind society in history. We’reacountry that is led byablack President and has legal …